ရောဂါပိုးမကူးစက်အောင် စွမ်းအင်ပြည့်ဝစွာ နေထိုင်ကြမယ် – Good Health Journal
ရောဂါပိုးမကူးစက်အောင် စွမ်းအင်ပြည့်ဝစွာ နေထိုင်ကြမယ်
COVID – 19 ရောဂါရှိသူတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ တွေ့လာရပြီဆိုတော့ အားလုံးရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေက ပိုမို မြင့်မားလာပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွင်း စိုးရိမ်စိတ်တွေ လျှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုရင် စွမ်း အင်ပြည့်ဝပြီး စိတ်ရွှင်လန်းတက်ကြွနေ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ခန္ဓာကိုယ်ခု ခံအားကောင်းပြီး ကူးစက်ပိုးမွှားတွေ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအစာ စားသုံးလိုက်တဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု သုံးမျိုး ရရှိစေပါတယ်။ အဲဒါတွေက –
(၁) ကယ်လိုရီကို လုံလုံလောက်လောက် ရရှိစေတယ်။
(၃) ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကို ကောင်းစေတယ်။
တချို့အစားအစာတွေက သွေး တွင်းသကြားဓာတ်ကို မျှခြေဖြစ်အောင် ထိန်းပေးထားပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ခံစားမှု ကောင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ ဆီရိုတိုနင်ကိုထွက် စေပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျ တာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပြီး စိတ် ရွှင်လန်းစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်ပြီး စိတ် နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်တွေကို ရရှိစေပါ တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်အတွက်အဓိက အသုံးပြုပြီး ဆီရိုတိုနင်ပမာဏကို မြှင့် တင်ပေးပါတယ်။ အချိုဓာတ်များတာ တွေက ခန္ဓာကိုယ်ကိုနုံးချည့်စေပြီး စိတ်ခံ စားမှုကိုလေးလံစေတာကြောင့် ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ကောက်နှံတစ်ခုလုံးနဲ့ လုပ် ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်၊ ဆန်လုံးညိုနဲ့ ကွေကာ တွေကို စားသုံးပေးပါ။ စားသုံးလိုက်တဲ့ ကောက်နှံတစ်ခုလုံးကို ခန္ဓာကိုယ်က ဖြည်းဖြည်းချင်း စုပ်ယူတာကြောင့် သွေး တွင်းသကြားဓာတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းထားနိုင်ပြီး စိတ်ခံစားမှုပါ တည်ငြိမ် စေပါတယ်။
အစေ့အဆန်တွေမှာ ပရိုတင်းဓာတ် တွေ များစွာပါဝင်ရုံသာမကဘဲ သကြား ဓာတ်ကို စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရာမှာပါဝင်တဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်တွေလည်း များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ သုတေသနပြုလုပ်ချက် တွေအရ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မဂ္ဂနီဆီယမ်ချို့တဲ့ ပါက စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို ကောက်နှံတစ်ခု လုံး၊ ကွေကာနဲ့ တချို့ငါးတွေကနေ ရရှိ နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ဆီလီနီ ယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစေ့အဆန်တွေနဲ့ စိတ် ခံစားမှုက ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဆီလီနီ ယမ်ကို အသား၊ ပင်လယ်စာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး နဲ့ကောက်နှံတစ်ခုလုံးကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။
♦ အဆီထုတ်ထားသော အသား
အဆီထုတ်ထားတဲ့ဝက်သား၊ အဆီ ထုတ်ထားတဲ့အမဲသား၊ အရေပြားမပါတဲ့ ကြက်သားနဲ့ ကြက်ဆင်သားတွေကအမိုင် နိုအက်စစ် တိုင်ရိုစင်းပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်း ကို ရရှိစေပါတယ်။ တိုင်ရိုစင်းက ဒိုပါမင်း နဲ့ နော်အပီနက်ဖရင်းတွေကို ဦးနှောက် ကနေထွက်ရှိဖို့ ကူညီပါတယ်။ အသားမှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်ဘီ ၁၂ က အိပ်မပျော် တာနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဆီများတဲ့ ဆယ်လ်မွန်လိုငါးမှာ အိုမီဂါ-၃ အဆီတွေပါဝင်ပါတယ်။ လေ့ လာမှုတွေအရ စိတ်ဓာတ်ကျတာကို ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိုမီဂါ-၃ အဆီက စိတ်ဓာတ်ကျတာနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိ၊ မရှိဆိုတာ သေချာ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အို မီဂါ-၃ က နှလုံးကျန်းမာရေး အတွက်တော့ များစွာအ ထောက်အကူပြုပါတယ်။ အိုမီဂါ- ၃ အဆီကိုငါးအ ပြင် အစေ့အဆန်တွေနဲ့ အ စိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေကနေလည်းရနိုင်ပါတယ်။
♦ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ
စိတ်ဓာတ်ကျတာ ဖြစ်ပွားမှု နည်းစေတဲ့ အာဟာရတွေထဲမှာ ဖောလိတ် ပါဝင်ပါတယ်။ အိုမီ ဂါ-၃ အဆီလိုပဲ ဖောလိတ်ကို အစိမ်းရင့်ရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ဆလတ်ရွက်တွေ ကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပဲညွန့်၊ အစေ့အ ဆန်နဲ့ အချဉ်ဓာတ်ရှိတဲ့ အသီးတွေကနေ လည်း ဖောလိတ်ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်က စွမ်းအင်ကို ထိန်း ထားနိုင်ပါတယ်။ အစာခြေဖျက်မှုကို နှေး စေပြီး တစ်နေ့တာလုံး စွမ်းအင်ပြည့်၀ နေစေပါတယ်။ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကောက်နှံ တစ်ခုလုံးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကနေ အမျှင်ဓာတ်ကို ရရှိစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်လျော့နည်း ပါက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပါတယ်။ လေ့ လာမှုတချို့အရ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ် အနည်းငယ်ပဲ လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် တောင် ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကို နှေးစေပြီး စွမ်း အင်ရရှိမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ရေ များများသောက်ပေးပါ။ အချိုရည်တွေနဲ့ အဖျော်ယမကာတွေအစား လတ်လတ် ဆတ်ဆတ်ဖျော်ထားတဲ့ သစ်သီးဖျော် ရည်သောက်ပေးပါ။
♦ အရည်ရရှိနိုင်သော အစားအစာများ
ရေဓာတ်ရရှိစေဖို့နဲ့ စွမ်းအင်ရရှိဖို့ အတွက် အရည်ရွှမ်းတဲ့သစ်သီးနဲ့ ဟင်း သီးဟင်းရွက်တွေစားသုံးပေးပါ။ တချို့ အစားအစာတွေက ချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ အခါ ရေဓာတ်များစွာစုပ်ယူထားနိုင်ပါ တယ်။ ကွေကာက အရည်နဲ့ရောနှော လိုက်တဲ့အခါ ရေကိုစုပ်ယူထားပါတယ်။ အဲ ဒီလိုအစားအစာမျိုးကို စားပေးသင့်ပါတယ်။
ကော်ဖီကိုလူကြိုက်များကြပါတယ်။ ကော်ဖီက ကောင်းကျိုးကို ခဏသာပေး စွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီက ခန္ဓာကိုယ်အ တွက် ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ခဏတာ ကောင်းစေ ပြီး စိတ်ကိုနိုးကြားတက်ကြွစေကာ စွမ်း အင်ကို ခဏတာရရှိစေပါတယ်။ ကော်ဖီ ကို တစ်ခါသောက်နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏ သောက်ပေးတာက တစ်ခါတည်း အများ ကြီးသောက်တာထက် အာနိသင် ပိုရစေ ပါတယ်။ ကော်ဖီအများကြီး သောက် တာက ညဘက်အိပ်မရဖြစ်စေပါ တယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာက စွမ်းအင် ကို သိသိသာသာလျော့နည်းစေပါ တယ်။
သုတေသီတွေက လက်ဖက် ရည်မှာ ကဖင်းနဲ့ အမိုင်နိုအက်စစ် ဖြစ်တဲ့ L-theanine တွေ ပါ ဝင်တာကြောင့် နိုးကြားစေ တယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဓာတ် ပြုမှုတွေကို တိုးတက်စေ တယ်၊ ဦးနှောက်ဉာဏ် ရည်ကို တိုးတက်စေ တယ်လို့ပြောပါတယ်။
ချောကလက်အညို အနည်းငယ်ပမာဏ စား သုံးရင်တောင် စွမ်းအင်ရရှိ စေပြီး စိတ်ကိုနိုးကြားစေပါ တယ်။ ချောကလက်မှာပါဝင် တဲ့ သီရိုဘရိုမင်(Theo-bro­mine)က နိုးကြားတက်ကြွမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
မနက်စာက စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်း တာကြောင့် မနက် စာမစားဘဲနေတာမျိုး မနေသင့်ပါဘူး။ လေ့လာမှုအရ မနက်စာ ကို နေ့စဉ် စားသုံးသူတွေက တစ်နေ့လုံး စွမ်းအင် ပြည့်ပြည့်၀၀နဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာကို တွေ့ရ ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးမနက်စာဖြစ်ဖို့ အမျှင်ဓာတ်များများပါဝင်တဲ့ ကောက်နှံ တစ်ခုလုံး၊ မပြည့်ဝဆီနဲ့ အဆီမပါတဲ့ ပရို တင်းတွေပါဝင်အောင် စားပေးပါ။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ထိန်းသိမ်း ဖို့၊ စွမ်းအင်ရရှိဖို့နဲ့ စိတ်ရွှင်လန်းနေစေဖို့ အစားအစာစားတဲ့အခါ နည်းနည်းနဲ့ မကြာခဏ စားပေးပါ။ သရေစာကို အ ချိန် သုံး-လေးနာရီ ကြာတိုင်း တစ်ကြိမ် စားပေးပါ။ စွမ်းအင်ရရှိစေတဲ့ သရေစာ တွေက ကောက်နှံတစ်ခုလုံးနဲ့ လုပ်ထား တဲ့ ခရက်ကာ၊ ကြက်သားဆင်းဒဝှစ်၊ ကောက်နှံကွေကာနဲ့ နို့တွေပါ။
စွမ်းအင်ရရှိစေဖို့ ဖြည့်စွက်သောက် သုံးနိုင်တာတွေက ကဖင်းနဲ့ တခြားလှုံ့ ဆော်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အရာတွေပါ။ ဖြည့်စွက်သောက်သုံးမှုကြောင့် စွမ်းအင် ရရှိတယ်ဆိုတာ ခဏတာပါ။ သုတေသီ တွေက ဖြည့်စွက်သောက်သုံးမှုကြောင့် ရရှိတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ စိတ်တက်ကြွမှုတွေက ကော်ဖီသောက်သုံးတာကြောင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးအာနိသင်ထက် များစွာမပိုပါဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။
♦ စွမ်းအားဖြည့် အချိုရည်
စွမ်းအားဖြည့်အချိုရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်တွင်း မှာ ချက်ချင်းပဲ စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်း လဲပါတယ်။ စွမ်းအားဖြည့်အချိုရည် တွေက ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို တက် စေပြီး အာဟာရရရှိမှုနည်းစေပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်တာက စွမ်းအင်ရရှိဖို့နဲ့ စိတ်ရွှင်လန်းစေဖို့ မှန် ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်တဲ့ အရိုး ရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတောင် စွမ်းအင်ရ ရှိစေပြီး စိတ်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာ မှုအရ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာက စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းတာကို သက်သာ စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကို ပြောင်းလဲပေးတာကြောင့် တစ်နေ့တာ လုံး စွမ်းအင်ရရှိနေစေပါတယ်။
♥ ခိုင်သစ္စာရှင် (ဆေးဝါး)
Categories:	WUHAN-CORONA-COVID 19	/ by Good Health Admin April 2, 2020
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ အတွက် ၁၀၀% နီးပါး ထိရောက်မှုရှိသည့် ကုသနည်းကို တွေ့ရှိပြီ ဟုဆို
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါမှ သိပ္ပံပညာရှင်...
Article, WUHAN-CORONA-COVID 19	Read More
ကိုဗစ်ကာလမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာနေစေဖို့
၁။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ပူပြင်းတဲ့ ရာသီ ဥတုမှာ...
Article, Question and Answer, WUHAN-CORONA-COVID 19 ... , Read More
Mask တပ်ဖို့ တကယ်လိုရဲ့လား Mask တပ်နည်းကော မှန်ရဲ့လား
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) စပြီးဖြစ်ပြီဆိုကတည်းက...